Nkọwa ụlọ ọrụ - Foshan Chengpai Sanitary Ware Co., Ltd. '
Tọrọ ntọala na 2012, ụlọ ọrụ ahụ bụ ọkachamara na ịmịpụta isi na isi isi mmiri, isi mmiri ịsa ahụ, isi ụlọ ịsa ahụ, ụlọ ịsa ahụ, ogwe mmiri, ọkpọkọ, ime ụlọ ịsa ahụ, ngwaike ime ụlọ ịwụ, wdg.
Ọ nwere a nkwa usoro ekpuchi nnyocha na mmepe, n'ichepụta, àgwà akara, na mgbe-sales ọrụ.
Ya na ngwaahịa na-tumadi exported na Europe, na US, Ndịda Ebe Ọwụwa Anyanwụ Eshia, na Middle East, wdg mgbe enterprise aghọwo ihe OEM onye nke ọtụtụ ụwa na-ama sanitary ụdị.
Ilekwasị anya na-amị na-ajụ na n'elu ngwaahịa, na enterprise-etinye àgwà tupu nke ukwu na ogologo e ewepụtara na mmepe nke onwe-ekesịpde ika uru na ebumnuche na-aghọ ndị kasị mma nke ndị anaghị agba nchara-ịdị ọcha ike ụlọ ọrụ.
Ọ na-akwụ ụgwọ iji wuo ụlọ ịsa ahụ "Mara mma, Top-ọkwa, Enyi na gburugburu ebe obibi, ahụike na-adịgide adịgide" ma raara onwe ya nye ndị na-agbaso ọfụma na-atọ ụtọ na ndụ ha.Site na ngwaahịa Chengpai, ị nwere ike ịnwe mmiri ozuzo nke ikuku ịgba ọchịchịrị iji belata ike ọgwụgwụ ụbọchị ahụ n'ụzọ ọ bụla masịrị gị. Nwee obi ụtọ na ịtọ ọ showerụ Chengpai na-atọ ụtọ ma zuru ike na ntụrụndụ!
Chengpai nwere ụkpụrụ siri ike maka ịhọrọ ngwa. Ngwongwo ya nile nwere igwe site na 304 igwe anaghị agba nchara ma nweghi ndu, chromium, mkpuchi electroplated, ihe na-egbu egbu, na ihe ojoo. Ahụ ike na nke na-adịghị egbu egbu, ngwaahịa ya na-echekwa ike ma zute ụkpụrụ nchekwa gburugburu ebe obibi nke mba Europe na US.
Dabere na ụkpụrụ nke iguzosi ike n'ezi ihe ọrụ na mmeri-mmeri imekọ ihe ọnụ, Chengpai abanyewo isi ụlọ ahịa na-echekwa nke China na Ofesi mba. Enwere ike ịchọta ngwaahịa ya na Hamburg, Milan, London, Florida, Canada, France, Belgium, Middle East, na mba ndịda Ebe Ọwụwa Anyanwụ Eshia.